Fahantrana… anton-javatra sy voka-javatra | NewsMada
Fahantrana… anton-javatra sy voka-javatra
Par Taratra sur 22/11/2021
Maina ny tany. Mila ho maina mbamin’ny tenda, ny teny… Inona indray no holazaina na hozakaina amin’izao. Efa manomboka manahirana izao ny fahitana rano amin’ny faritra sasany; eny, na izay hosotroina sy hahandroan-kanina aza. Vao mainka izay amin’ny famokarana: fambolena, fiompiana, taozavatra…
Hanao ahoana? Mampanahy be ihany izay havoakan’ny ampitso. Tsy olana amin’ny vanim-potoana hoe fahavaratra na taom-pamokarana intsony izao, fa fahasahiranana isan’andro… mandavantaona. Na izay rano hosotroina aza izany manahirana: mila tandremana, mila fahaiza-mitantana, fijerena lavitra…
Na izany aza, tsy maintsy atrehina izay misy sy iainana. Misy hatrany ny azo atao? Fijerena mivelatra sy lavitra amin’izay, fa ny tsy fisiana sy tsy fanaovana izany izay ela izay no antony fototra nahatongavana amin’izao: fitrandrahana tafahoatra ny harena maitso, tsy fikajiana ny rano, ny fanimbana tsy misy farany ny tontolo iainana…
Efa voka-javatra ny fiovaovan’ny toetr’andro? Na ny tsy fisian’ny orana ka mahamaina ny tany tsy ahazoa-mamokatra… Tsy anton-javatra iandrasana fotsiny izay mety hitranga na izay hiafarany izany. Mila hiverenana ka hahitsy ny lalan-diso hatramin’izao: fampandrosoana nitondra tamin’ny fahapotehana miadana sy maharitra.
Mila fehezina amin’izay, ohatra, ny fampiasana rano. Miara-dalana ho azy amin’izany ny fitahirizana sy fitantanana ny rano mbamin’ny fambolen-kazo tsy maintsy atrehina sy atao koa, fa tsy vitan’ny ady amin’ny fandripahana ala sy ny doro tanety. Indrindra ny amin’izay antony fototra mahatonga izany: fahantrana?
Ny fahantrana no anisan’ny mahatonga izao fahavoazana izao? Na ny fihazakazahana amin’ny fihariana sy fampandrosoana tafahoatra: tsy niheverana ny hafa, tsy nijerena lavitra. Mbola fahantrana koa no ho vokany, raha tsy voatandrina? Na ho ratsy lavitra noho izay niaingana ny farany: tany mitaraina fa maina…